Waamicha Fincila Xumura Gabrummaaf godhame! – Ayyaantuu
Fincila Xumura Gabrummaa Barattoota Oromoo - Update Guraandhala 6, 2021
#Shawaa_Dhihaa_Geedoo #Barattootni keenya itti muddaa jiru. Jabaadhaa Barattootni keenya. #Naqamtee #Qaanqeen_Ambootti eegale guutummaa #Oromiyaa waliin…
Fincila Xumura Gabrummaa Magaalaa Ambootti Geggeeffamaa Jiru.
Fincila Xumura Gabrummaa Magaalaa Ambootti Geggeeffamaa Jiru. Guraandhala 6, 2021